I Kwesịrị Imelite peeji nke ejiri ọkwa ya nke ọma? SEO echiche | Martech Zone
Fraịde, Machị 5, 2021 Fraịde, Machị 5, 2021 Douglas Karr
Otu onye ọrụ ibe m kpọtụrụ m bụ onye na-etinye saịtị ọhụrụ maka ndị ahịa ha ma jụọ m ndụmọdụ. O kwuru na ihe SEO ọkachamaraNke ahụ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ dụrụ ha ọdụ ka ha hụ na ibe ndị ha na-aha maka ka a ghara ịgbanwe ma ọ bụghị ha nwere ike ida ọkwa ha.
Nke a bụ nzuzu.
N'ime afọ iri gara aga m na-enyere ụfọdụ akara aka kachasị n'ụwa ka ha kwaga, gbasaa ma wuo usoro ọdịnaya nke jikọtara ogo dị ka ụzọ bụ isi nke atụmanya na ndu. N'ọnọdụ ọ bụla, enyere m onye ahịa aka ịkwalite peeji dị ugbu a yana ọdịnaya metụtara ya n'ọtụtụ ụzọ:
Ijikọ ọnụ - N'ihi usoro ha na-emepụta ọdịnaya, ndị ahịa na-enwekarị ihu igwe na-adịghị mma nke kachasị ọdịnaya. Ọ bụrụ na ha nwere ajụjụ iri na abụọ; dịka ọmụmaatụ, gbasara isiokwu… ha na-ede 12 post blog. Rankedfọdụ họọrọ dịkwa mma, ọtụtụ emeghị ya. M ga-ahazigharị peeji ahụ ma bulie ya na ajụjụ niile dị mkpa gaa na otu isiokwu ahaziri ahazi nke ọma, m na-emegharị peeji niile na nke kachasị mma, wepu ndị ochie, ma lelee peeji nke ihu igwe n'ọkwá. Nke a abụghị ihe m mere otu oge… Ana m eme ya oge niile maka ndị ahịa. M n'ezie na-eme ya ebe a na Martech Zone, Kwa!
Structure - Achọpụtarala m slugs peeji nke, isiokwu ya, mkpụrụ okwu gbara ọkpụrụkpụ, yana mkpado mesiri ike ka ịhazi ibe maka ọfụma onye ọrụ. Ọtụtụ ndị na - ahụ maka SEO ga - atụ ụjọ n’ibugharị akwụkwọ mpịakọta ochie na nke ọzọ, na - ekwu na ọ ga - adị hapụ ụfọdụ n'ime ikike ya mgbe emeziri. Ọzọkwa, emeela m nke a na saịtị m ugboro ugboro mgbe ọ nwere ezi uche ma ọ na-arụ ọrụ oge ọ bụla m jiri amamihe mee ya.
content - Enweela m isi okwu ederede na ọdịnaya iji nyekwuo nkọwa na nkọwa ndị kachasị ọhụrụ nke ga-eme ka ndị ọbịa bịa. Ọ dịkarịrị ka m na-ebelata ọnụ ọgụgụ okwu na ibe. Ọtụtụ mgbe, m na-arụ ọrụ na ịgụkwu okwu, na-agbakwunye ngalaba ndị ọzọ, na-agbakwunye eserese, yana itinye vidiyo n'ime ọdịnaya. M na-anwale ma na-ebuli meta nkọwa maka peeji niile nke oge na-agbalị na ụgbọala mma click-site udu si search engine N'ihi peeji nke.
Izu ole na ole gara aga, edere m banyere otu esi eme ya chọpụta SEO ohere iji melite ogo ogo ya wee kwuo na m chọpụtara Ọbá akwụkwọ ọdịnaya dị ka nnukwu ohere ịkwọ ụgbọala ọzọ ogo. Ejiri m 9th maka edemede m.
Emere m mgbanwe zuru ezu nke isiokwu ahụ, na-emelite aha isiokwu ahụ, isiokwu meta, nkọwa meta, na-eme ka isiokwu ahụ dị na ụfọdụ ndụmọdụ na ọnụ ọgụgụ emelitere. Emere m nyocha nke ibe m niile iji hụ na ibe m haziri nke ọma, dị ọhụrụ, ma edekwa ya nke ọma.
Nsonazụ ahụ? Ewepụrụ m isiokwu ahụ ogo 9th na ogo 3!
Mmetụta nke a bụ na m okpukpu abụọ nke ihu akwụkwọ n'oge gara aga site na okporo ụzọ okporo ụzọ:
Ọtụtụ afọ gara aga, ọ bụ enwere ike igwu egwu algorithms ma ị nwere ike ibibi ogo gị site na ịme mgbanwe na ọdịnaya ị họọrọ n'ihi na algorithms dabere na njirimara peeji karịa omume onye ọrụ.
Google na-aga n'ihu na-achịkwa ọchụchọ n'ihi na ha ji nlezianya kpaa abụọ. M na-agwakarị ndị mmadụ na a ga-edepụta peeji ndị ahụ maka ọdịnaya ahụ, mana edepụtara ya dabere na ewu ewu ya. Mgbe ị na-eme ha abụọ, ị na-arị elu ọkwa gị.
Ikwe ka atụmatụ, nhazi, ma ọ bụ ọdịnaya ahụ n'onwe ya na-eguzosi ike bụ ụzọ dị nchebe iji tufuo ogo gị dị ka saịtị asọmpi na-etolite ahụmịhe ndị ọrụ ka mma yana itinyekwu ọdịnaya. Algọridim ga-agagharị na ntụziaka nke ndị ọrụ gị yana ewu ewu ibe gị.
Nke ahụ pụtara na ị ga-anọgide na-arụ ọrụ na ọdịnaya na imewe njikarịcha! Dịka onye ewere goro iji nyere ndị ahịa aka njikarịcha njin nchọta oge niile, a na m elekwasị anya na ogo ọdịnaya yana ahụmịhe onye ọrụ na algorithms.
N'ezie, Achọrọ m buputa uhie kapeeti iji chọọ engines na saịtị na ibe SEO omume kacha mma… mana m ga etinye ego na ya imeziwanye ihe eji eme ihe oge ọ bụla ịhapụ ịhapụ ibe ya agbanweghị n'ihi ụjọ ma ọ bụ tufuo ogo ya.
I Kwesịrị Imelite peeji nke ejiri ọkwa ya nke ọma na nsonaazụ njin ọchụchọ?
Ọ bụrụ na ị bụ SEO ndụmọdụ na-adụ ndị ahịa gị ọdụ ka ha ghara imelite ọdịnaya ha kachasị elu… Ekwenyere m na ị na-eleghara ọrụ gị anya iji nyere ha aka ị nweta nsonaazụ azụmaahịa dị mma. Companylọ ọrụ ọ bụla kwesịrị idobe ọdịnaya peeji ha nke oge, dị mkpa, na-adọrọ adọrọ, ma na-enyekwa ahụmịhe onye ọrụ ka mma.
Nnukwu ọdịnaya agwakọtara na ahụmịhe onye ọrụ dị elu agaghị enyere gị aka nọrọ n'ọkwá ka mma, ọ ga-emekwa gbaa ndị ọzọ tọghatara. Nke a bụ ihe mgbaru ọsọ kasịnụ nke ịzụ ahịa ọdịnaya na atụmatụ SEO… ọ bụghị ịnwa ịba algọridim ahụ.
Tags: njikarịcha ọdịnayaoptimizing ọdịnayahọọrọ ọdịnayasearch engine njikarịchaAakụkọ ifoimelite ọdịnaya